misokatra amin'ny varavarankely vaovao manokatra fisie PDF Na dia mitaky hetsika fitantanana maharitra aza ny fandrahonana maharitra ho an'ny vatohara toy ny fiakaran'ny ranomasina, ny kalitaon'ny rano ratsy, ary ny fanjonoana tafahoatra, ny hetsika mahery vaika (ohatra, ny tafio-drivotra mahery, ny fiparitahan'ny solika) matetika dia mitaky karazana famaliana vonjy maika avy hatrany miaraka amin'ny hetsika famonjena. zanatany haran-dranomasina ary manamboatra vatohara. Ny fiatrehana ny fiantraikany haingana sy amin'ny fomba mahomby dia zava-dehibe amin'ny fampitomboana ny mety hisian'ny zanatany haran-dranomasina sy ny haran-dranomasina aoriny hanohy hanome tolotra sarobidy ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampitandremana mialoha sy ny fihetsiketsehana haingana momba ny valin-kafatra: Hetsika hanalefahana ny fiantraikan'ny rivodoza mahatsiravina amin'ny vatohara.manokatra fisie PDF , novolavolain'i Zepeda et al. (2019), dia manolotra dingana enina hitarihana ny mpamaly voalohany sy ny mpitantana ny haran-dranomasina amin'ny hetsika tokony hatao mialoha, mandritra, ary aorian'ny rivodoza tropikaly mba hanalefahana ny fiantraikan'ny haran-dranomasina.
Dingana 1: Fandrindrana sy fanomanana
Manoritsoritra ny hetsika hatao ivelan'ny vanim-potoanan'ny rivodoza tropikaly, hanomana sy hanomana ny zavatra ilaina amin'ny fampiharana ny Protocole.
Dingana 2: Fampitandremana mialoha
Manoritsoritra ny hetsika tokony hatao mandritra ny fampitandremana mialoha raha misy rivodoza tropikaly any amin'ny faritra, na amin'ny dingana manatona na mihemotra.
Dingana 3: Fanombanana ny fahasimbana haingana
Manoritsoritra ny teknika ampiasaina amin'ny fanombanana haingana izay hampiharina mba hamaritana ny haavon'ny fahapotehan'ny haran-dranomasina sy ny habetsaky ny fako avy amin'ny rivodoza. Izy io koa dia manolotra fomba ahafahana manao laharam-pahamehana sy mamantatra ireo tranonkala mila valiny haingana.
Dingana 4: Valiny Kilonga
Manoritsoritra ny hetsika famaliana voalohany tokony hatao avy hatrany, raha vantany vao miala ny rivodoza. Tafiditra ao anatin'izany ny fanadiovana sy ny hetsika 'fanampiana voalohany'. Ity no fizarana fototra amin'ny Protocole.
Dingana 5: Valiny faharoa
Manoritsoritra ireo hetsika famaliana faharoa izay tokony hatao aorian'ny fahavitan'ny ezaka famaliana voalohany. Anisan'izany ny fanamafisana ny tapaka ara-drafitra, ny fitantanana ny akanin-jaza, ary ny fikojakojana sy ny fanaraha-maso ireo toerana nampiana nandritra ny valinteny voalohany.
Dingana 6: Hetsika taorian'ny valinteny
Manoritsoritra ny hetsika hatao rehefa vita ny dingana famaliana. Tafiditra ao anatin'izany ny famolavolana drafitra famerenana amin'ny laoniny sy ny fanombanana ny fahombiazan'ny fampiharana ny Protocole.
Ny fanakorontanana hafa dia ny fijanonan'ny sambo sy ny fihanaky ny aretin'ny haran-dranomasina. Mitovitovy amin'ny tafiotra ihany ny valin'ny fahasimbana ara-mekanika ateraky ny fanorenan-tany, saingy misy fahasamihafana lehibe vitsivitsy amin'ny fanorenan-tany izay tokony hodinihina aloha, ao anatin'izany ny fanesorana ny sambo sy ny fivoahana simika (ohatra, lasantsy, menaka, na loko antifouling). Ny valin'ny fihanaky ny aretina dia miankina amin'ny karazana, ny hamafin'ny aretina ary ny halehiben'ny fipoahana. Ohatra tsara amin'ny protocole valin'ny aretin'ny haran-dranomasina dia ilay novolavolaina tany Florida sy Karaiba misokatra amin'ny varavarankely vaovaoaretina fahaverezan'ny tavy vatoharamanokatra fisie PDF .
Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Lesona 6 amin'ny Course Online Restoration Coral Reef.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDiniho ny lesona 6
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitr'asa ho an'ny fiatrehana haingana an'i Hawai'i amin'ny fisehoan-javatra amin'ny fandotoana haran-dranomasina, aretina na fihanaky ny kintana amin'ny satroboninahitry ny tsilomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanombanana, Fanorenana ary Fandaharana Famerenana amin'ny laoniny ny NOAA
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandinihana tranga: Ny fomba nanosikantsika vato harana 400 taonina ho any an-dranomasina taorian'ny rivo-doza tany Aostralia
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandinihana tranga: Fanombanana ny fiantraikan'ny rivo-doza 2017 amin'ny haran-dranomasina any Porto Rico